Tsy misy porofo na kely aza, ary tsy misy lanjany eo anatrehan’ny fanjakana sy ny mpitondra izany, hoy ny minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana sady mpitondra tenin’ny Governemanta Harry Laurent Rahajason (Rolly Mercia), tao amina onjam-peo iray omaly, hita hoe hendratrendratra be ihany no sady nikorapaka ihany ingahy minisitra naneho hevitra. Olona kely iray mizaka ny zom-pirenena Frantsay ary sokajiana ho olona tsy misy dikany iny, na “un petit minable” no nanasokajian’i Rolly Mercia azy, ka olona toy izany iny ve dia andeha hatahoran’iza ? hoy izy. Any ivelany izy dia mitety haino aman-jery dia milaza zavatra be dia be. Mihevitra sy manantena izy fa tsy ho voakitikitika intsony satria any Frantsa dia resahina izay tiany resahiny rehetra, hoy hatrany ity minisitra ity. Nohamaivaniny tanteraka ny zava-misy kanefa efa maloto endrika tanteraka aloha ny minisitry ny fitsarana Malagasy ny fitondrana misy eto eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena satria manao kolikoly. Goavana ny ampamoaka andiany voalohany nataon’i Houcine Arfa, ary misy antony lehibe ao matoa tsy voasambotra any Frantsa izy, na dia efa fantatry ny manampahhefana any an-toerana tsara aza ny toerana misy azy .